Zaza 4 volana maty sempotry ny plastika teo am-pandriana
Zazakely vao efa-bolana monja no hitan’ny reniny nitsitra tsy nisy aina intsony, tamin’ny alahady teo, tany Grand-Quevilly, any amin’ny departemantan’i Seine-Maritime any Frantsa.
Tao amin’ny tranon’ny raibeny sy renibeny no nitrangan’ny loza. Ilay renim-pianakaviana nikiakiaka, rehefa nahita an’ilay zaza tsy niaina intsony, no nanaitra ny mpifanolo-bodirindrina. Araka ny fantatra dia natory irery io zaza io ary nandeha nijery azy, raha matory tsara, ny reniny, no nahita ny vatana mangatsiakany. Na natao aza ny ezaka rehetra namelomana azy, dia tsy avotra intsony ilay zaza. Raha ny valin’ny fanadihadiana hatreto dia karazana plastika niraikitra tamin’ny fanaka, ho fiarovana amin’ny vovoka, no nilatsaka teo amin’ny tarehin’ilay zaza, nandrakotra ny vavany sy ny orony, ka nanempotra azy ary nitarika an’izao fahafatesany izao.